DAAWO SAWIRRO ARGAGGAX LEH Qoys ka Koobnaa 5 xubnood oo dab is qabadsiyay Kadib Markii �. Ha daawan Hadii aadan Awoodin
Waxaa dalka India ka dhacday dhacdo argaggax leh taasi loo ay siwayn uga naxeen bulshada ku dhaqan caalmaka oo dhan kadib markii qoys ka koobnaa 5 xubnood ay inta banziin isku shubeen kadibna dab is qabadsiyay.
nasro on April 04 2013 ·
DAAWO: Ra�isul Wasaare hore Dr Gaas oo kahadlay maamul usamaynta J/Land iyo Arimo kale
Xili Khlaaf xoogan uu ka taagan yahay howsha maamul usamaynta gobollada Jubbooyinka ayaa waxaa arintaas kahadlay R/Wasaarihii hore Soomaaliya Mudane Dr Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Kenya oo qaar kamid ah ciidamadeeda kala baxaysa gobollada Jubbooyinka
Dowlada dalka Kenya ayaa sheegtay in dhawaan ay Gobollada Jubbooyinka kala bixi doonto qaar kamid ah ciidadeeda kusugan halkaas.
Read More · 145 Reads
Shabaab oo lagu eedeeyay qarax lagu qaaday xarunta Dahabshiil ee Suuqa Bakaaraha
Maalin kahor ayaa weerar qarax ah lagu qaaday xawaalada Dahabshiil xarunteeda Suuqa Bakaaraha, waxaana weerarkaas kahadlay dowlada Soomaaliya.
Gabadh Ciyaartoy ah oo isku qaawisay Gudaha Garoonka (Daawo)
Gabadhan oo ka mid ah Ciyaaryahanada looogu jecelyahay Sweden ayaa isku hor qaawisay Taageerayaal badan markii saaxiibkeed uu ka dalbaday in Funaanadiisa ay gishato.
Read More · 1749 Reads
Wiil Mucjiso qabsatay Markii uu Jeexjeexay Sawirka Madaxweyne Caan ah (Daawo)
Magaalada Qaahira oo Banaanbaxyo looga soo horjeeday Xukunka uu qabtay Madaxweynaha Ikhwaanul Muslimiinka ka socday ee Masar Mudane Mursi ayaa waxaa ka dhashay arin ka yaabsatay dad badan.
Read More · 1766 Reads
Darawal Qaab Xariifnima ah Iskaga dajiyay Shixnad Culus (VIDEO)
Darawalkan oo qaab xariifnima ah iskaga dajiyay Shixnad uu soo raray ayaa waxaa uu ka yaabiyay indhaha Daawadayaasha goobtaasi ka dhawaa iyo dhammaan dadkii daawaday Muuqaalkaasi Video-ga ah.
Read More · 997 Reads
Halkan Ka Daawo Daqiiqadii ugu damneysay Lamaane Yaxaas Liqay !(VIDEO)
Lamaanahan ayaa dalxiis ahaan badda doon u raacay waxaana ay ku dhiiradeen in dabaqa hoose ee doonta ay tagaan si Biyaha badda u soo gaaraan Jirkooda uguna Raaxeestaan Biyaha dhexdooda.
Read More · 1875 Reads
ARDEYDA DUGSIYADA MUQDISHO OO LOOGA MAARO LA'YAHAY JOOJINTA FACEBOOK IYO NIMBUZ, INTA XISOOYINKA AY KU JIRAAN.
Ardeyda wax ka barata inta badan iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa qaati looga taagan yahay isticmaalka Internet-ka, gaar ahaan goobaha social networks-ka.
Read More · 532 Reads
Daawo Muuqaal Cajiib AH: Gabar Aan Muslim Ahayn Oo La Ooysay Aadaanka Salaada
Gabar wariye ah oo aan muslim ahayn ayaa la khushuucday aadaan ay maqashay xili ay booqasho ku joogtay dalka Sucuudiga.
Read More · 2160 Reads
Daawo muuqaalka: Barlamaanka Puntland ayaa taageeray shirka lagu dhisayo maamulka jubbaland
Baarlamaanka maalmul goboleedka Puntland oo taageeray shirweynaha maamul u samaynta Jubaland oo Kismaayo ka socda iyo ansixintii Dastuurka maamulkaas oo shalay la meel mariyey,waxana xildhabaandan oo Saxaafadda Garoowe kula hadlay ay hanbalyo u direen dadweynaha ku nool Jubooyinka iyo Gedo.
Mohamed112 on April 04 2013 ·
Read More · 178 Reads
Page 138 of 737: 1...135136137138139140141...737
4,540,100 unique visits